के बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ? के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला - ज्ञानविज्ञान
के बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ? के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला
विवाहित दम्पत्तीले सन्तानको तयारी गर्नुअघि योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा गर्भवती भएपछि एकैपटक डाक्टरकोमा जँचाउन जाने चलन छ । तर, सन्तानको योजना बनाउनुअघि नै दम्पतीहरु चिकित्सकको परामर्शमा आउनु राम्रो हो । सहरी क्षेत्रकै जनमानसमा पनि यसबारे त्यत्ति सचेतना देखिँदैन । बिनातयारी गर्भवती हुँदा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा कतिपय अवस्थामा जटिलता देखिन सक्छ । स्वास्थ्य परीक्षणपछि आधारभूत प्रक्रिया पु¥याएर गर्भवती हुँदा यस्ता जटिलता कम गर्न सकिन्छ।
Topics #बच्चा #योजना
Don't Miss it के खाने शरीरको बोसो कम गर्न ?
Up Next कस्तो खानेकुराहरुले गराउछ एलर्जी ?
हातगोडा बाउँडिनेका कारण यस्ता छन्
-बसाइ नमिल्दा शरीरको कुनै एक भागमा मात्रै दबाब पर्न गयो भने उक्त भागमा पोषण र अक्सिजनको प्रभाव कम हुन्छ ।…